သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> လမိုင်းအထည်အလိပ်
စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Taiwan, Our company၏တစ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း လမိုင်းအထည်အလိပ် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းလိုင်းကျယ်ပြန့်ရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ကိုအောင်မြင်စွာစျေးကွက်နှင့်ပြည်ပမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်တင်ပို့မှုပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးနှင့်ထိရောက်မှု၏အမြင့်ဆုံးဖြစ်နိုင်သောစံချိန်စံညွှန်းမှာထုတ်ကုန်ကိုထုတ်လုပ်ရန်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုဆက်လက်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်သင့်သောပညာကို selection ကိုရလိ​​မ့်မည်။ ကျနော်တို့စိတ်ရင်းမှန်နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာသင့်အတွက်အကောင်းဆုံးလက်တွဲဖော်ဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ချီတုံချတုံမ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ အဖြစ်မကြာမီသင်သည်တတ်နိုင်အဖြစ်!
LF 12-1 : အထည်အလိပ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ
2. polyester အထည်အလိပ်
3. Spunlace က Non-ယက်အထည်အလိပ်
4. အထူးအအမည်: TPU Bond, ဗီနိုင်းအင်္ကျီ, က Ultra-အလငျးကိုအလေးချိန်, Breathable
5. အရောငျ: စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းပုံစံ
6. စံနမူနာ, အရောင်, စမ်းသပ်ခြင်းစံနှင့်အခြားဆှေးနှေးရကြိုဆိုကြသည်။
7. မူလအစ: ထိုင်ဝမ်
LF 12-2 : မွေ့ရာအထည်အလိပ်
LF 12-3 : သည်တဲတော်ပစ္စည်းများ
1. 20D ~ 70D နဲ့ Micro ဖိုင်ဘာပစ္စည်း
ရရှိနိုင်သော 2. မြင့်ရေစိုခံ, Breathable, RF ဂဟေဆော်ခြင်း
Customer များအတွက် 3. ခရမ်းလွန်-cut, မီးပျက် ... စသည်တို့အတွက်အထူးအမည်။
LF 12-4 : ရေစိုခံပစ္စည်း
အထူးအ Crinkle Finish, ဆော့ဖ Touch ကိုအတူ 1. Taslon 228 အထည်အလိပ်
2. C6 ရေတွန်းလှန် & Non-ဖလိုရင်းရေတွန်းလှန် Eco-friendly ဖြစ်တဲ့
3. မြင့် Breathable & waterproof အမြင့်
5. အရောငျ: ထူးထူးအထွေထွေရှိငြားအရောင်များကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်သို့မဟုတ် customized နိုင်ပါသည်။
ထိုင်ဝမ် YungYaw Fabrictech ကော်ပိုရေးရှင်းကထုတ်လုပ် 7.
၏မြင့်မားသောအရည်အချင်းပြည့်ဝမှုနှင့်အတွေ့အကြုံပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုမ္ပဏီအများစုစျေးနှုန်းသက်သာကုန်ကျစရိတ်မှာအရည်အသွေးအကောင်းဆုံးကိုကယ်နှုတ်ဖို့ဆိုရမှာပါ။ ရှေ့ဆက် Going, ကျနော်တို့တန်ဖိုးနှင့်ဖောက်သည်ကျေနပ်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးသောပေးစေခြင်းငှါအပေါင်။